Iindaba -Ungayenza njani ipaki yokonwabisa abantwana bakho ukuba ibonakale ngakumbi!
Uyenza njani ipaki yolonwabo yabantwana bakho ukuba ibebala ngakumbi!
1. Uhlobo lomxholo
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemixholo yokuhombisa kwepaki yabantwana, enjengolwandle, ihlathi, iilekese, indawo, umkhenkce nekhephu, ikhathuni njalo njalo. Ngaphambi kokuhonjiswa, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ebanzi kunye nophando ukufumanisa ukuba loluphi uhlobo lwabantwana abalukhethayo, ukumisela uhlobo lomxholo wepaki. Emva kokuba isitayile simiselwe, izixhobo zokuzonwabisa kunye nokuhonjiswa kwesiza kufuneka ziyilwe zijikeleze umxholo, ukuze ipaki yolonwabo yabantwana bonke ibe nesimbo sokubonakalayo, kwaye akusayi kubakho kungqubana.
2. Ukudibanisa umbala
Ukuhonjiswa kweparadesi yabantwana ngombala kunye nendawo eneyona nto ikhanyayo, ikhululekile, imnandi njengolwalathiso lokhetho, kunokuba ngumbala ohlukileyo. Ukwahlulahlula isithuba semisebenzi eyahlukeneyo, umbala wotshintsho ngokubanzi unokukhetha umhlophe. Yila isithuba separadesi yabantwana enemibala, engafanelekanga kuphela kwizengqondo zabantwana ezingenangqondo, kodwa ikwanokutsala umdla wabo okokuqala, ukuze ipaki yolonwabo ibonakale isempilweni kwaye inemibala.
3. Impilo nokhuseleko
Nangona iipaki ezininzi zokuzonwabisa zabantwana kufuneka zihonjiswe ngamaziko okhuseleko, into yokuqala ekufuneka iqwalaselwe kukubonelela ngezixhobo ezikhuselekileyo zabantwana. Ke ngoko, kumhombiso weparadesi yabantwana, izixhobo kufanele ukuba zinobungqongileyo kwindalo kwaye akufuneki ziqulathe izinto eziyityhefu okanye ivumba elicaphukisayo; iingcingo akufuneki zivezwe ngaphandle; izixhobo kufuneka zikhuselwe kakuhle ziingxowa ezithambileyo kunye neenethi zokuzikhusela; imiphetho kunye neekona kufuneka zijikeleze okanye zijike.
4. Uphawu lweempawu ezintsha
Ukuhombisa akufuneki kuxelise ezinye iindlela. Kuyimfuneko ukudibanisa ubungakanani kunye nemeko yentengiso yeparadesi yabantwana ukwenza isitayile sayo sokuhombisa ngokubhekisa + kwi-Innovation + ukuphumelela, ukwenzela ukunika abathengi umbono onzulu, ngokwenza oko kube nefuthe lophawu kunye nokuhamba ngakumbi kwabahambi.
5. Umoya jikelele
Umoya wokusingqongileyo wakhiwe ujikeleze umxholo wemfundo kulonwabo, obonisa umbono oqinisekileyo wemeko-bume yeparadesi yabantwana. Kuyo yonke indawo yepaki, umsebenzi kunye nenjongo yeparadesi yabantwana kufuneka kugxininiswe kwimiba yokuthelekisa imibala, ukhetho lwezinto kunye nolwakhiwo ngokubanzi, ngakumbi kwinkalo yombala kunye neethoni, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zobuhle bomphefumlo wabantwana.
Ngokubanzi, uyilo lokhanyiso lweparadesi yabantwana ikakhulu lusekwe kwiimfuno zesiza, ubume obufanelekileyo, ingqalelo kwisitayile somhombiso, umbala, njl., Ayisiqwalaseli kuphela isiphumo esipheleleyo, kodwa ikwabonisa neempawu zayo.